निकिताको किन छैन चर्चा ? | Ratopati
निकिताको किन छैन चर्चा ?
काठमाडौं । पूर्व मिस नेपाल निकिता चण्डक अहिले अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यु गर्दैछिन् । उनको अभिनय रहेको पहिलो फिल्म ‘साङ्लो’ माघ २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा यसको मुख्य अभिनेत्री रहेकी निकिताको यतिबेला चर्चा चुलिनुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
‘साङ्लो’ मा निकिता अभिनेता विराज भट्टको जोडीको रुपमा देखिदै छिन् । बिराज एक समयका एक्सन हिरो हुन् । तर पछिल्लो समय भने उनको क्रेज त्यति छैन । जसको पुष्टी केही वर्ष अगाडि रिलिज फिल्म ‘जय पशुराम’ को ब्यवसायले पनि गर्दछ । यो फिल्म बक्स अफिसमा नराम्रोसँग पछारिएको थियो ।
कलाकारको चर्चा त्यतिबेला चुलिन्छ । जतिबेला निर्माण युनिटले फिल्मको उचित प्रचार–प्रसार गर्दछ । वा कलाकार आफै फिल्मको प्रचारका लागि मिडियासम्म पुग्न सक्दछन् । यी दुबै कुरामा फिल्म ‘साङ्लो’ र यसकी मुख्य अभिनेत्री निकिता पछि रहेकी छन् । त्यसैले पनि निकिताको चर्चा हुन नसकेको हो ।
अभिनेत्री निकिताको यो डेब्यु फिल्म हो । यस हिसाबले पनि फिल्मको सफलता निकिताको आगामी दिनको फिल्मी करियरका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर निकिताको चर्चा र फिल्मको हाइप हेर्दा फिल्मको ब्यवसाय यसै भन्न सकिन्न् ।
‘साङ्लो’ मृगौला तस्करीको कथामा बनेको फिल्म हो । फिल्मको निर्देशन पनि अभिनेता विराजले नै गरेका हुन् । फिल्ममा विराज र निकिताको अलवा जयनन्द लामा, कामेश्वर चौरसिया, प्रकाश शाह, आरपी पन्त, लय संग्रौला, अमित गिरी, शिशिर भण्डारी, रमेश सोडारीलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
शिवम् अधिकारीको लेखनमा रहेको फिल्ममा सुरेश अधिकारी र राजनराज शिवाकोटीको संगीत, श्री श्रेष्ठको द्धन्द र मानकृष्ण महर्जनको छायाँकन छ ।